I-Atresmedia kunye neMediaset, enezabelo ze-10% | Ezezimali
Iinkampani zeendaba zosasazo zonxibelelwano kuzwelonke, iAtresmedia neMediaset, zezona ngoku zisasaza esona sabelo sikhulu sesabelo semali saseSpain »]. Ngenzuzo yonyaka ekufutshane kakhulu Amanqanaba angama-10% kwaye zingaphezulu kweSpanish ezidwelisiweyo. Ngaphezulu kwamacandelo aziwa ngemivuzo ephezulu, njengombane okanye iinkampani zamandla eziphakathi kwe-5% kunye ne-7%. Ngale ndlela, ngokutyala imali kwi-Atresmedia nakwi-Mediaset, ingeniso emiselweyo kunye neqinisekisiweyo inokufunyanwa minyaka le, into ebangela umdla kakhulu.
Ngokukodwa, ukuba kuthelekiswa nenqanaba lenzala eliveliswa kwiimveliso zebhanki kulondolozo okanye kwiziphumo zengeniso esisigxina engadluli kwi-1%. Ngenxa yoko Ixabiso eliphantsi lemali yi-European Central Bank (ECB). Kwaye oko kuye kwakhokelela ekubeni ubonelelo lwemali lube kwi-0% ngeli xesha. Ngamanye amagama, kumgangatho ophantsi wembali iminyaka eliqela kwisicwangciso soluntu sokunyusa ukukhula koqoqosho kwindawo ye-euro.
Ewe, la ngamaxabiso amabini anokuba nomdla wokuqesha ukusukela ngoku ngenxa yenzuzo kwizabelo zabo. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobugcisa kunye nokusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Nangona ukuvela kwayo kwiimarike ze-equity kwezi nyanga zidlulileyo khange kuyonelise kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngenxa ye- ukwehla kwamaxabiso abo kwaye bazibeke kwinqanaba eliphantsi kakhulu lomrhumo. Ngaphantsi koqikelelo lwabanye abahlalutyi kunye nomthengisi wezemali.
1 I-Atresmedia kunye ne-Mediaset: ishishini
2 Ibuyile kumaxabiso ayo
3 Isitshixo kukuthengisa
4 I-Atresmedia kwinqanaba le-4 euro
5 Icandelo elinezindululo ezimbalwa
6 Iziphumo zazo zombini iinkampani
I-Atresmedia kunye ne-Mediaset: ishishini
Enye yeengxaki ezijamelene nezi nkampani zimbini zidweliswe kwimarike yaseSpain eqhubekayo ngamathandabuzo abakhoyo kumashishini abo. Ngokukodwa, ngokubonakala kwezinye hlawula amajelo eTV kunye nezona zindululo zintsha zonxibelelwano ezisasazwayo ezisasazwayo. Kule meko ngokubanzi, ezi zokhuseleko zohlwaywa ziiarhente zotyalo-mali. Nangona kukho enye into ebonisa ukuba banokwenza umgangatho ekwakheni amaxabiso abo.
Ngelixa kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba la maxabiso mabini alinganayo eSpain ajikeleza kakhulu. Oku kuthetha ukuba bakhulisa ukusebenza ngcono kunabanye kwimeko yokuxhoma yeebhegi. Ngelixa ngokuchaseneyo, ngamaxesha aphindaphindeneyo bathanda ukwenza kakubi kunakwamanye amacandelo. Ukusuka kolu luvo, banokuthathelwa ingqalelo njengamaxabiso agudileyo njengoko ebonisa umohluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi. Ke ngoko, iluncedo kakhulu kwimisebenzi yorhwebo.
Ibuyile kumaxabiso ayo
Emva kokulahla la maxabiso amanqanaba angaziwayo Kwiminyaka yakutshanje, kuye kwakho isaphulelo kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Nangona inokuba ngumgibe we-bearish apho abatyali zimali abancinci nabaphakathi banokuwela khona. Kuba ekupheleni kosuku yonke into iyakuxhomekeka kweloluphi ulwalathiso lweemarike zezabelo. Iya kuba sisitshixo sokwazi ukuba lelona xesha lilungileyo lokungena kwizikhundla zakho okanye, ngokuchaseneyo, hlala ngaphandle kwawo nawuphi na umsebenzi wotyalo mali.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba ziinkampani ezinxulumene nazo ishishini lokuthengisa kwaye oku ngokungathandabuzekiyo kuyatshintsha. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba iya kuba yenye yezona zilahlekileyo zijamelene nokudodobala kwezoqoqosho okulandelayo. Yintoni enokuba nefuthe lokwehla kwexabiso kwezi zimbini zosasazo zidweliswe kwimarike yemasheya. Ke ngoko, ubulumko kufuneka ibe yeyona nto idume ngokulawula izenzo zakho kwiimarike zezabelo. Kungenxa yokuba ngokomgaqo ukubanakho ukuphononongwa kuphezulu kakhulu, kodwa nakwinqanaba lokulungiswa. Ngasentla kubonisiwe kwezinye iimarike zentengiso.
Inxalenye elungileyo yengeniso yeAresmedia kunye neMedaset zivela kwintengiso. Ngale ndlela, ezinye iingxelo zisandula ukupapashwa zibonisa ukuba le ngeniso izakwehla ngokubonakalayo ukusuka kunyaka olandelayo. Esi iya kuba sisizathu esaneleyo ngaphezu kokulibala ngezi zindululo zimbini kwimarike yemasheya ixesha elide. Kungenxa yokuba inokusinika ngaphezulu kwesinye isimanga esibi ukusukela ngoku. Ngaphandle kwezinye iintlobo zokuqwalaselwa kwisicwangciso sotyalo-mali.
Kuya kufuneka kwakhona ukuba iyathakazelelwa into yokuba naluphi na utshintsho kwimvume yamajelo kumabonwakude waseSpain anganefuthe ngqo ngqo. Ukuya kwinqanaba lokuba inokwenza ukuba isenzo sabo siwe okanye sixabise kwizikwere zikazwelonke. Kwicandelo elibonakaliswa ngokuba tshintsha kakhulu kwaye oko kuxhomekeke ikakhulu kuhlumo lwezoqoqosho lwelizwe. Apho ukufunyanwa kwamalungelo kamabonakude kunokutshintsha kakhulu amaxabiso, zombini eAresmedia naseMediaset. Eli nqaku alinakulityalwa ukuba ufuna ukubabandakanya kwipotfoliyo elandelayo yotyalo-mali.
I-Atresmedia kwinqanaba le-4 euro
Le ndlela yonxibelelwano inenkxaso yayo kwii-euro ezingama-4 ngesabelo ngasinye. Ukuba kugqityiwe, kuyakufuneka kulungiswe izikhundla ngesantya esikhethekileyo kuba ukuwa kunokuba nzima kakhulu ukusuka kuloo mzuzu kanye. Ukusuka kule ndawo yokujonga akusayi kubakho khetho ngaphandle kokujonga ngononophelo amaxabiso akho ukuphuhlisa esona sicwangciso silungileyo sokutyala imali Ngelixa ukuba, ngokuchaseneyo, ukwazile ukoyisa isithintelo esinama-euro angama-5 iya kuba nakho ukwenza inqanaba lokungena elincomekayo ukwenza inzuzo ngokulondoloza ngokhuseleko oluthile. Into engenziwanga ngalo mzuzu, nangona kuya kufuneka silinde iiseshoni ezimbalwa zokuthengisa.
Ngelixa ngokuchaseneyo, okhuphisana nayo uMedaset wenza urhwebo kuluhlu olubanzi oluhambayo ukusuka kwi-7 ukuya kwi-9 ye-euro ngesabelo ngasinye. Kuya kufuneka ukhethe ukugqitha kula manqanaba kwixabiso lawo ukuze imeko yawo ichazwe ngokucacileyo. Oko kukuthi, i-bullish okanye i-bearish ngokuxhomekeke kwiintshukumo ezithathiweyo. Ngaphandle komdla onokuthi ubekho kwinxalenye yabatyali mali abancinci nabaphakathi ukuze bathathe izikhundla ngenxa yomtsalane wezahlulo eziphezulu. Kwaye apho unokumisela khona iphothifoliyo yomvuzo ngaphakathi kwinto eyahlukileyo. Ngomvuzo onokufunyanwa kwiimveliso ezimbalwa zemali.
Icandelo elinezindululo ezimbalwa
Ngayiphi na imeko, ayisiyiyo enye yamacandelo akhethwe ngabahlalutyi bezemali ababona amathuba okushishina ambalwa ngokuvulwa kwezikhundla. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, bayalumkisa ngomngcipheko kule misebenzi kwaye ngokubanzi bakhetha ukuthengisa kunokuthenga. Ngaphandle kokunyuka okukhulu kumaxabiso abo anokukhula ukusukela ngoku. Banokusebenza ngaphezulu kwako konke ukushiya izikhundla kula maxabiso mabini ukuya khusela imali yenzelwe ukutyala imali. Ubuncinci kwizicwangciso zotyalo-mali zexesha elifutshane ezifuna isakhono esikhulu kubatyali zimali zentengiso.
Okwangoku, eyona nto bayitsala kakhulu ilele kwisahlulo esiphambili abasasasazayo phakathi kwabanini zabelo. Kodwa ngomngcipheko ocacileyo wokulahleka kwikoteyishini yamaxabiso ayo. Ngokukodwa ukuba badiliza izixhaso ngokubaluleka okuthile, njengaleyo ichazwe apha ngasentla. Phakathi kwezinye izizathu, kuba uxinzelelo lokuthengisa Iya kuba namandla kakhulu kwiimarike zezemali. Ngobunyani bokwenyani bokuba ubuncinci bonyaka bunokufikelelwa kuqikelelo lwayo kwimarike yemasheya. Into enokwenzeka ngokugqibeleleyo kumjikelo wokugqibela walo nyaka.
Iziphumo zazo zombini iinkampani
I-Atresmedia ifumene iziphumo ezigqwesileyo kwikota yokuqala yonyaka, eyona datha yayo intle kweli xesha leminyaka eli-11. Inzuzo yenkampani ikhule nge-36,6% ukuya kwi-28,7 yezigidi ze-euro, eyona iphezulu kwikota yokuqala ukusukela ngo-2008. Ngo-45,1, ngomda ongaphezulu kwengeniso eyi-35,8%, eyona iphezulu kwiinyanga ezintathu zokuqala zonyaka ukusukela ngo-2018.
Okwangoku, okhuphisana nayo uMediaset España uvale unyaka we-2017 ngeyona datha yezoqoqosho iphezulu ukusukela ngo-2008. Amandla orhwebo kwinkampani, ekhokele kutyalo-mali lwentengiso ukusukela ngo-2004, kunye nolawulo lwezixhobo zayo, zikhokelele ekunyuseni inzuzo yayo ye-15,5% xa kuthelekiswa ukuya ku-2016 ukufikelela kwizigidi ezingama-197,5 ze-euro. Ingeniso epheleleyo yentengiso yemithombo yeendaba ikhule phakathi kukaJanuwari noDisemba 2017 nge-1,6% ukuya kwi-946,4 yezigidi ze-euro, ngaphandle kokungabinamalungelo okusasaza kuwo nawuphi na umsitho omkhulu wezemidlalo ngo-2017, njengoko kwenzekayo ngo-2016 nge-Soccer Eurocup. Kubandakanywa intengiso yomntu wesithathu (€ 23,3 yezigidi) kunye neekhomishini, ingeniso yentengiso iyonke yayiyi- € 928,7 yezigidi. Phakathi kwezinye izizathu, kuba uxinzelelo lokuthengisa Iya kuba namandla kakhulu kwiimarike zezemali. Ngobunyani bokuba ubuncinci bonyaka bunokufikelelwa kuqikelelo lwamaxabiso kwimarike yemasheya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Atresmedia kunye neMediaset, enezabelo ze-10%